Xildhibaan Katirsan Aqalka Sare Oo isku Day dil Ka Badbaaday Kadib Weerar Lagula Eegtay Degmada Hodon.
Tuesday September 05, 2017 - 11:15:40 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya degmada Hodon ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in toogasho ka dhacday agagaarka isbitaalka Digfeer ay dhalisay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kaldoonyahay.
Xoogag hubeysan ayaa rasaas huwiyay laba gaari oo ay la socdeen askar iyo saraakiil katirsan DF-ka xilli ay gaadiidkaasi ku socdaalayeen meel ku dhow isbitaalka Digfeer.
Warar hordhac ah waxay sheegayaan in si dirqi ah uu ku badbaaday Xuseen Cali Xaaji oo ah xildhibaan katirsan aqalka sare ee Baarlamaanka dowladda Federaalka.
Xildhibaanka Bad baaday oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in gaarigii uu la socday rasaas lala helay balse isaga aysan wax dhibaata ah soo gaarin.
Ilo wareedyo madax banaan ayaa sheegaya in gaari Cabdi Bile ah oo daba socday gaariga xildhibaanka rasaastu ay waxyeello xooggan gaarsiisay, ugu yaraan laba askari ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerarka.
Lama oga sheegashada Xildhibaan Xuseen Cali Xaaji ee ah in uu ka bad baaday isku day dil oo la doonayay in adduunka lagu dhaafsiiyo.
Xarakada Al Shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay silsillada weerara ah ka fulinaysay degmooyinka gobolka Banaadir waxayna weeraradaasi gallaafteen nolosha askar iyo saraakiil katirsan DF-ka.